Usuku Lokuzimela (kusuka kuBilly Mays, ShamWow nakuHeadOn) | Martech Zone
Usuku Lokuzimela (kusuka kuBilly Mays, ShamWow nakuHeadOn)
ULwesihlanu, July 4, 2008 ULwesihlanu, July 4, 2008 Douglas Karr
Ithelevishini ivame ukuba semakhaya ethu, kepha imvamisa umsindo wangemuva. Uma ngibuka ithelevishini, kuvame ukuba yiDiscovery Channel. Namuhla usuku lwesonto, ngakho-ke ngizulazula eziteshini amahlandla ambalwa. Ngemuva kwesikhashana, siqashe imovie nje. Nazi izizathu ezi-3 zokuthi kungani:
Ngiyathemba ukuthi lo mfo uqulekile ngoba kukhona omthele ngamehlo.
Uyazinqumela ngemuva kokubona ukuhweba kwabo izikhathi ezingama-47.
Ukuphela kwento okumele ngabe lo mfana uyayithengisa udayi wezinwele nentshebe.
Ukukhangisa okwesabisayo kumane nje kuwukukhohlisa, hhayi ukumaketha. Angazi ukuthi yini engikhathaza kakhulu - lezi zikhangiso noma iqiniso lokuthi kumele ngabe ziyasebenza.
Tags: izinkombalinksIzitudiyo ze-neo mammalianuxhaso lwamavidiyoinqola yokuthenga ye-wordpress
Ividiyo yami kaJulayi 4
Jul 5, 2008 ku-10: 18 AM
Ngiyazizonda izikhangiso zeHead On, kepha izinto ziyasebenza. Noma kunini lapho ngiphathwa yikhanda elibi kakhulu, ngizolisebenzisa ngingabe ngisaba nekhanda!